Dowladda Jarmalka Oo Ku Dhawaaqday in Saraakiisheeda Melleteri Ay Kala Baxayso Soomaaliya.
Friday February 02, 2018 - 17:34:25 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxaya dowladda Jarmalka oo kamid ah dhinacyada qeybta ka ah duullaanka lagusoo qaaday dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lasoo gaba gabeynayo joogitaankii Melleteriga wadankaasi ee Soomaaliya.
Dowladda Jarmalka waxay xaqiijisay in dabayaaqada Bisha Maarso ee sanaddan 2018 ay labaxayso saraakiisheeda Melleteri ee qaabka tababarka ah ujooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Mas'uul u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Jarmalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in sababta ay uga baxayaan mashruuca tababarka Midowga Yurub ee Soomaaliya uu yahay horumar la'aan iyo dib udhac joogta ah oo ku yimid ciidamada dowladda Federaalka.
Jarmalku waxuu sheegay in wax horumar ah uusan ka muuqan ciidamada DF-ka islamarkaana aysan haysan hub iyo qalab ku filan oo ay ku noqon karaan ciidamado awood leh sidaas daraadeed ay ku qasbanaatay in saraakiisheeda Melleteriga ay kala baxdo dalka.
Ciidamada Jarmalka ee isaga bixi doono dalka Soomaaliya ayaa gaaraya 20 sarkaal kuwaas oo kaalin weyn ku lahaa tababaridda Maleeshiyaadka DF-ka ee loo diyaarinayo in ay la wareegaan ammaanka dalka Soomaaliya marka ay ciidamada AMISOM isaga baxaan dalka.
Shabakadda SPIEGEL Online ee laga leeyahay Jarmalka oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ayaa sheegtay in bisha Maarso ee soo socota ay melleteriga Jarmalka si dhameystiran uga baxayaan Soomaaliya.
Arrintan ayaa dib udhac ku ah dowladda uu madaxda ka yahay Farmaajo oo sanaddii lasoo dhaafay Mareykanku uu ka jartay lacagihii uu siin jiray kadib musuq maasuq iyo xatooyo hareeyay wasaaradda G/dhigga iyo taliska Melleteriga.